All About Call Center – MMCloud
In-house call center. မိမိorganization သာ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ agent, (သို့) team နဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် run တဲ့ call center အမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင် team ကပဲ handle လုပ်ရတဲ့အတွက် အခြားသော သူများအစားဖုန်းဖြေကြားပေးတာထက် ပိုပြီး ထိရောက်မှုရှိပြီးတော့ information confidentiality အတွက် လည်း စိတ်ချရပါတယ်။
Outsourced call center. Organization တစ်ခုခုဟာ သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် သူတို့ကိုယ်စား ဖုန်းဖြေကြား‌ပေးဖို့ third party တစ်ခုကို outsource ငှားပြီး run တဲ့ call center ပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ call center agents တွေ အမြောက်အမြားကို ငှားရမ်းဖို့နဲ့ training လုပ်ရတာတွေ call center technology ကို invest လုပ်ဖို့ နဲ့ update လုပ်ရတာတွေကို ရှောင်ရှားလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ outsource အပ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်း အားဖြင့် operating cost ကိုလျော့ချနိုင်ပါတယ်။
Offshore call center. Organization ဟာ သူတို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ operation တွေကို ပြုလုပ်ဖို့ အတွက် အခြား နိုင်ငံတစ်ခုမှာရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကို ပုံမှန်အားဖြင့် ငွေကုန်ကြေးကျ ပိုမိုပြီး သက်သာစေဖို့နဲ့ အချိန်တိုင်း ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ဖို့ အလို့ငှာ outsource အပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ အဝေးရောက်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ ဘာသာစကား issue တွေ organization နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ နည်းပါးတဲ့ အတွက် customer satisfaction ကိုတော့ လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
Call center agents. Agents တွေဟာ customer တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီး ဖုန်းcal တွေကို handle လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် organization နဲ့ သူ့ရဲ့ customer ကြား ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့ အဓိကကျတဲ့ သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ call center အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး agent တွေဟာ အဝင်ခေါ်ဆိုမှုတွေကို ဖြေဆိုရမှာလား အထွက် ခေါ်ဆိုမှုတွေကိုပါ ပြုလုပ်ရမှာလားဆိုတာ ကွာသွားပါတယ်။ Call center agent တွေဟာ များသော အားဖြင့် customer service skill တွေ ရှိတတ်ကြပြီးတော့ မိမိရဲ့ organization နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ ကြွယ်ဝကြပါတယ်။ issues တွေ ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ လည်း အဆင်ပြေသွားအောင် ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ရှိရှိ ဖြေရှင်းတတ်ကြပါတယ်။
Team leaders. Call Center အများစုမှာ စီမံခန့်ခွဲဖို့ လွယ်ကူအောင်လို့ အုပ်စုသေးလေးတွေ ခန့်ထား လေ့ရှိကြပါတယ်။ Team leaders တွေဟာ မိမိအုပ်စုက call center agents တွေ ကို issues တွေ ကောင်းမွန်စွာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့၊ customer ဆီကမေးတဲ့ မေးခွန်းမှန်သမျှကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ထပ်ပေါင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိလက်အောက် မှာရှိတဲ့ call center agents တွေကို အလုပ်လုပ်ရာမှာပျော်ရွှင်စေပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ တာဝန် တွေကို စွမ်းဆောင်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးကြပါတယ်။
Quality assurance team. Quality Assurance လို့ခေါ်တဲ့ QA team ကတော့ မိမိ organization ရဲ့ products( သို့) service တွေဟာ requirements နဲ့ ကိုက်ညီရဲ့လားဆိုတာကို agent တွေရဲ့ phone call တွေကို monitor ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ Customer experience ရယ်နဲ့ Call Quality တွေ အဆင်ပြေရဲ့လား၊ ဆိုတာကို စစ်ဆေးကြပါတယ်။ တချို့ call center တွေမှာဆိုရင်တော့ Call Center Directors တွေက QA စစ်ဆေးတာကို ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
IT personnel. IT professionals တွေဟာ call centers တွေအတွက် အရေးပါကြပါတယ်။ IT personnel တွေဟာ call center တွေအတွက် သီးသန့် မဟုတ်ကြပေမယ့် သူတို့ဟာ agent တွေ အသုံးပြုတဲ့ call center နည်းပညာတွေ နဲ့ equipment tools တွေဟာ call center ကို အဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့ မွေ့ နဲ့ run နိုင်အောင် up to date ဖြစ်ရဲ့လား၊ ဆိုတာ အမြဲ စစ်ဆေးနေကြရပါတယ်။
Airlines – Customers တွေဟာ ‌airline toll-free number‌ တွေကို ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အခါမှာ IVR menus တွေကနေ တဆင့် customer service agents တွေနဲ့ စကားပြောနိုင်ပါတယ်။ customers တွေဟာ flight statuses, flight details အကြောင်းအရာတွေကို check လုပ်နိုင်ပြီး customer agents တွေကနေတဆင့် လေယာဉ်ကို re-book ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရာသီဥတု အခြေအနေတွေကြောင့် flight delay ဖြစ်တာတွေ cancellation ဖြစ်တာတွေကိုလည်း customer တွေဆီကို အလျင်အမြန် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်။
Healthcare – Customers တွေဟာ healthcare providers တွေကို appointments တွေ ပြုလုပ်ဖို့၊ ပြောင်းလဲဖို့ နဲ့ physicians တွေကို မေးခွန်းတွေ မေးမြန်းဖို့အတွက် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ off-hours တွေမှာ အရေးပေါ်ဖြစ်တဲ့ အခြေအနေတွေအတွက် healthcare providers တွေဟာ outsourced call centers တွေကို အသုံးပြုပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကို လက်ခံ ပြီး သက်ဆိုင်ရာ physician တွေဆီကို လွှဲပြောင်း ပေးနိုင်ပါတယ်။
Retail – အရင်ကတည်းက customers တွေဟာ ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်နေတဲ့အတောအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဝယ်ပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် retail business တွေဆီကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး သိလိုသမျှ မေးမြန်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ customers တွေဟာ မိမိဝယ်ချင်တဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြောင်းအရာ ပေါင်းစုံကို customer service agent ဆီဆက်သွယ်ပြီး မေးမြန်းကြပါတယ်။ ဝယ်ယူပြီးပြီဆိုရင်တော့ customers တွေဟာ missing item (သို့) return ပေးဖို့ request လုပ်ဖို့အတွက် ဆက်သွယ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။
What is FCR ( First Call Resolution )